Umthandazo Wemihla ngemihla Discover️ Discover Online ▷ ➡️
La umthandazo wemihla ngemihla Yenye ekuzalisa ngentuthuzelo okanye ithemba ebusweni bemeko eyoyikisayo eza kuwe; Ukongeza koku, abantu benkolo bayithatha njengembopheleleko kuba iyenye yeendlela ezilungileyo zokucamngca ngoThixo kwaye ubonakalise ukholo lwenene. Ukuba ufuna ukwazi yonke into enxulumene nesi sihloko, qiniseka ukuba ufunde inqaku esinalo namhlanje.
Umthandazo wemihla ngemihla wokuphilisa
1 Uthetha ngantoni Umthandazo Wemihla ngemihla?
2 Liliphi elona xesha lilungileyo lokuthandaza yonke imihla?
3 Ungacamngca njani noThixo?
3.1 Khumbula ubukho bukaThixo
3.2 Veza lonke unqulo, enkosi kunye nezicelo
Uthetha ngantoni Umthandazo Wemihla ngemihla?
Umthandazo wemihla ngemihla uyakuqinisekisa umzuzu woxolo noxolo, apho unokwenza unxibelelwano lokomoya phakathi kwakho noThixo. Usidale sinombono wokuba mkhulu kwaye womelele kunaso nasiphi na isidalwa esiphilayo, ngenxa yesi sizathu, amaxesha amaninzi asikhululekanga endaweni enye, kulapho ke kufuneka siqale ukukhangela kuThixo, nguye yedwa unokugcwalisa ithemba kunye noxolo ngexesha lokuphelelwa lithemba okanye lokubandezeleka.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukwenza imithandazo yemihla ngemihla, apho ukholo lwenene esinalo luboniswa kuThixo kwaye singamjongi nje kuphela kwiimeko apho kukho iingxaki ezisoyikisayo. Khumbula ukuba, ukungqinelana kunye nokudibana nabo BONKE, kuthetha ukuba uhlala unxibelelana noThixo, nguye obonayo nowaziyo yonke into.
Ngokuka-Pope Benedict XVI, ukuba abantu bagcina ubudlelwane apho ukuthembana kubonisiwe kwaye ngaphezu kwabo bonke ubuhlobo bokwenyani phambi kukaYesu Krestu, uyakubanika zonke izixhobo eziyimfuneko zokujongana neengxaki zobomi ngaphandle kwamaxhala. UYesu unika inzolo, ubulungisa, inyani, yonyusa iingcinga ezintle zabantu, iphakamisa imimoya yabo banesidingo, phakathi kwezinye izinto.
Liliphi elona xesha lilungileyo lokuthandaza yonke imihla?
Akukho xesha laneleyo lokuba uthandaze, kufuneka ukhumbule ukuba uThixo ngumhlobo wakho osenyongweni kwaye uyafumaneka ngexesha olifunayo. Ewe kunjalo, cacisa gca ukuba umthandazo kufuneka wenziwe ngokholo olukhulu kwaye ngaphezulu kwako konke ukubulela ngayo yonke into oyifezekisayo enkosi kuye.
Ukuba uthatha uThixo njengomhlobo wakho osenyongweni, kulula kakhulu ukukhupha umoya, umbulele okanye uthandaze ukuba uthandaze yonke imihla ukuze ufumane uxolo nenzolo yosuku. Ungathandaza xa uvuka, phambi kokutya, emva kokutya, xa kufuneka wenze isigqibo esikhulu, xa uziva usoyika okanye uza kuhamba, xa ulele okanye ujonge ngenjongo yokuba nombulelo ngako konke okuhle nokubi oko ukuthumile; kuba kwimeko nganye ukhule ngokobuqu kwaye uThixo akazange akushiye.
Khumbula ukuba uThixo ngoyena mhlobo usenyongweni onokumjonga kwiimeko, nguye yedwa ongasoze akushiye wedwa kwaye ukuthetha naye kukuzalisa ngalo lonke uxolo oludingayo. Into ebalulekileyo ngeli xesha kukuba uyenze ngokholo olukhulu kwaye uzinike ixesha elikhethekileyo, apho kungekho mntu unokukuphazamisa kwaye ufezekise ukucamngca okuhle, ndiyakuqinisekisa ukuba uyenza ngale ndlela, uya kufumana iziphumo ezingcono kunokuba ubulindele .
Ungacamngca njani noThixo?
Elona candelo libalulekileyo kuwe lokudala ubudlelwane bokwenyani noThixo kukwenza ukucamngca okuhle kugcwele ukholo kunye nomdla. Kubalulekile ukukhankanya ukuba umntu ngamnye wahlukile kwaye ke, le ndlela sikufundisa ngayo namhlanje inakho okanye ayisebenzi, nangona kunjalo, kukuwe ukufumana eyona ikulungeleyo kwaye uqalise ukuyenza, khumbula ukuba Umthandazo uyimfuneko kuyo yonke imeko ebomini bakho kwaye kufuneka ufunde ukuyenza.
Nanga amanye amanyathelo ekufuneka uwalandele ukwenza ukucamngca okuhle. Iziphumo zixhomekeke kumntu ngamnye nakwindlela abenza ngayo, ukuba lixesha lakho lokuqala, ungaqala ukuyenza ngayo yomibini imizuzu emihlanu yosuku, ude ufumane ukhuseleko kunye nokuzithemba okungakumbi.
Khumbula ubukho bukaThixo
Kweli nqanaba kubalulekile ukuba uqaphele ukuba into ebalulekileyo ayikuko ukwenza ukuba uThixo abekhona, kodwa kukukhumbula ubukho bakhe yonke imihla nangamaxesha onke. Eli lixesha apho kufaneleke ukuba ugxile emzimbeni wakho kwimisebenzi oza kuyenza, oko kukuthi, kufuneka ube uguqe ngamadolo okanye uhlale ngendlela ehloniphekileyo.
Khumbula ukuba umzimba nomphefumlo zimele into enye, ngolu hlobo lokuma unokuziva ukhuthazo kunye nethemba xa wenza imbeko kuThixo. Ukuba wenza esi senzo ngokholo nothando oluninzi, iziphumo ziya kuba ngcono kunokuba ucinga.
Okwangoku kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo izinto ezintathu kwaye siya kuzikhankanya apha ngezantsi ngeenkcukacha zazo:
Umthetho wokholo: Ngeli xesha unokwenza unxibelelwano olunzulu, apho umbonisa khona uThixo lonke ukholo lwakho kunye nokuvuma kwakho ekufuneka ukwenzile ukuze uzive useluxolweni. Mkhumbuze ukuba kulolo kholo unalo apho isizathu sokuphila okanye sokufa sifumaneka khona kwaye uphela ngo-Amen.
Umthetho wethemba: Bonisa lonke ithemba onalo phambi kwakhe, kunye nendlela akuncede ngayo ukuba uqhubele phambili yonke imihla, okokugqibela, khumbula kwakhona ukuba kweli themba kulapho ufumana khona isizathu sokuphila okanye sokufa uphele ngo-Amen.
Umthetho wesisa: Uchaza izizathu zokuba umthande yena nommelwane wakho, ukhumbule indlela alunge ngayo, kwaye uluqonde lonke uthando olumfaneleyo. Okokugqibela, kuya kufuneka ucacise ukuba esi senzo sesinye isizathu sokuba uphile kwaye uza kufa, uphelisa umthandazo ngo-Amen.
Veza lonke unqulo, enkosi kunye nezicelo
Kule nyathelo, ukusetyenziswa kwengqondo yakho kubaluleke kakhulu, unokucinga ukuba uYesu usecaleni kwakho, uhleli phantsi emva koko uthathe uxanduva lokujonga kwakhona imeko nganye ofuna ukuyisebenzisa ukucamngca.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukumnqula kwaye umbulele ngayo yonke into athe wakwazi ukuyenzela yona, nokuba incinci okanye ininzi, kuya kufuneka usoloko umbulela. Emva koku, yenza izicelo zomhla, ngendlela enyanisekileyo, khumbula ukuba kuphela komhlobo wakho wenene.
Ukuba ulithandile eli nqaku malunga Umthandazo wosuku ekufuneka uyenzile kunye neefom, akufuneki uyeke ukufunda Umthandazo waseKhatholika wasekuseniNdiyakuqinisekisa ukuba izakugcwalisa lonke ulwazi oludingayo.